Bolt Factory - China Bolt Vagadziri, Vagadziri
Isu tinotengesa huwandu hwakakura hwe din931 hex bolt. Aya ma-hex-head bolts aine mitezo yakasarudzika uye akapetwa pamwe nehurefu hwese zvichienderana neDIN 931 uye DIN 933 ari zinc yakarongedzerwa kuchengetedzwa kwecrosion.
Iyo DIN6921 Flange Bolt ine basa rekumisa kutenderera, iripo panowanikwa nzvimbo yekubatanidza inoda nzvimbo yakatsetseka kana yakatsetseka. Uyezve, yedu DIN6921 Flange Bolt yakakwana kune yakadzika kongiri simendi, uye inoshandiswa kugadzirisa zvigadziko zvemishini nemidziyo. Nekuda kwehukuru hwakakodzera uye compact dhizaini, inogona kuiswa kwese kuitira kuti ibatsire kuburitsa nzvimbo yenzvimbo dzakadzikira. Chitarisiko sliver chinotaridzika uye chakanaka.
Kupisa-dip galvanized hexagonal bolt
Chigadzirwa Chigadzirwa Kupisa Dip Galvanizing hex bolt saizi M2-M160 Material Carbon simbi, Isimbi isina tsvina, Sezvaunoda. Giredhi yeGiredhi: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Ect Surface Kupedzisa Plain, yakapfuura, (ROHS) Zn-yakaiswa, Ni-plated, Sezvaunoda. Standard DIN GB ISO JIS BS ANSI Certification ISO9001, SGS, Isiri-zviyero OEM inowanikwa kana iwe ukapa dhirowa kana sampuru. Package Standard kutumira kurongedza kana maererano nezvinodiwa nevatengi ...
Kupisa-dipira mabhii Anti-kubiwa Bolt
Zita Fastener mugadziri akasarudzika mabhaji ekudzivirira-kuba uye bolshe nati Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Zvishandiso zvisina tsvina, kabhoni simbi Finish Plain, zinc yakarongedzwa, dema Mhofu yepamusoro yepamusoro Anticorrosive Performance Munyu Spray Muedzo Kusvikira 1000-2000 Maawa Komborera Chikosheni, Chemical Indasitiri, Zvemamiriro ekunze, Kuvaka Certification ISO9001 2008 Kupaka Mabhokisi & pallets kana maererano nezvinodiwa nemutengi. Nguva yekutumira Kazhinji kazhinji mu15 ...
Isu tinotengesa huwandu hwakakura hwe din931 hex bolt. Aya ma-hex-head bolts aine mitezo yakasarudzika uye akapetwa pamwe nehurefu hwese zvichienderana neDIN 931 uye DIN 933 ari zinc yakarongedzerwa kuchengetedzwa kwecrosion. chiratidzo: JiuHe M16 saizi din931 hex bolt, M20 diameter din931 bolt, M24 din931 standard hex bolt, m30 din 931 hex bolt, ese ari mudura. Inoshandiswa kwazvo munzvimbo dzese dzejekerere.
A U-bolt ibhandi riri muchimiro chetsamba U ine screw tambo pamicheto miviri. Carbon simbi U bolt zvakajeka zvinoreva kuti zvinhu zveU bolt iri kabhuroni simbi.
Carbon simbi U bolt yakanyatso shandiswa kutsigira pipework, mapaipi kuburikidza ayo zvimvura uye magirazi kupfuura. Saka nekudaro, kabhoni simbi U-mabhaji yakayerwa uchishandisa pombi-inoshanda mainjiniya kutaura. Carbon simbi U-bolt yaizotsanangurwa nehukuru hwepipi hwaaitsigira. Carbon simbi U-bolt zvakare inoshandiswa kubata tambo pamwe chete.